Candy Crush 1642 - Candy Crush ဂိမ်း - အခမဲ့ဘဝပုံစံများသိကောင်းစရာများအရိပ်အမြွက်
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် / အမျိုးအစား / Candy Crush 1642
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ သြဂုတ်လ 16, 2021 အားဖြင့် Isobella ဖရန့် Comment တစ်ခု ချန်ထားခဲ့ပါ။
In recent times, Candy Crush has been the favorite game for most people of the world. People from all age groups have preferred this game over any other. သေချာပါတယ်, it is considered the best game in the world. Once it is recommended to anyone they also become addicted to it like the initial user. သို့သျောလညျး,asmall problem arises when the user gets stuck toalevel. It gets to their moods. နောက်ပိုင်းတွင်, they try out every possible move to clear it. This is why we bring some cheats and tricks to help them clear all. We bring cheats and tricks foracomplex level of Candy Crush 1642, in this article.
There are two tasks on hand. ပထမဦးစွာ, you have to collect one cherry and secondly, you have to scoreatotal of 35000 မှတ်. In addition to doing this task, you only have 35 ရွေ့လျား. It isatough ask because of the number of moves so you have to be careful while using them.
Candy Crush 1642 လှည့်စားခြင်းနှင့်လှည့်ကွက်
You have to make the cherry fall. To do this you move the cherry from one of the teleporters to the next. Additionally, matching candies can get it done. Try to get to the bottom field through the matching candies. တစ်နည်းအားဖြင့်, you can also use color bombs. They are relatively better in getting to the larger section.
To create the icing, သငျသညျဘုတ်အဖွဲ့အပေါ် icing ဖယ်ရှားပစ်ရရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်. သော်ငြားလည်း, ဘုတ်၏ပုံသဏ္knowingာန်ကိုသိသောဤအထူးသကြားလုံးများကိုပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်. ဘုတ်၏အလယ်ဗဟိုတွင်ကစားခြင်းဖြင့်ချယ်ရီကိုချခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါ.
အထူးသကြားလုံးများနှင့်အရောင်ဗုံးများသည်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုဖယ်ရှားရန်အလွန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်. ကန ဦး လှုပ်ရှားမှုသည်၎င်းတို့ကိုဖန်တီးရန်အာရုံစိုက်သင့်သည်. ဤလှည့်ကွက်များကိုသင်နားလည်ပြီးသည်နှင့်သင်၏အလုပ်သည်ယခင်ကထက်ကိုင်တွယ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်.